Manni Marii Dhimmoota Islaamaa Ityoophiyaa Mootummaa Naannoo Amaaraa irratti himannaa kan banu tahuu beeksise - NuuralHudaa
Manni Marii Dhimmoota Islaama Ityoophiyaa ibsa guyyaa har’aa baaseen, Mooxaa dabalatee magaalota naannoo Amaaraa heddu keessatti haleellaa Masjiidotaa fi qabeenya hawaasa muslimaa irratti raawwatame hordofuun, mootummaan naannichaa tarkaanfii gahaa hin fudhanne jechuun yakke. Haaluma kanaan haleellaa shororkeessitootaa kanaan qabeenya barbadaayee fi haqa dhabuun hamilee hawaasaa miidhaameef, manni marichaa mootummaa naannoo Amaaraa irratti himannaa banuuf kutaan seeraa qophii jalqabuu beeksise.
Majliisni Federaalaa ibsa isaa kanaan, mootummaan naannichaa fi bulchiinsi magaalaa Mooxaatis koree bilisa tahee dhimmicha qoratu hanga ammaatti kan hin hundeessin tahuu ibsuun, Mootumaan Federaalaa koree haleellaa shororkeessitootaan raawwatame kana qoratu hundeessee, tarkaanfii seeraa akka fudhatu jechuun waamicha godhe.
Manni Marii Dhimmoota Islaamaa Ityoophiyaa ibsa kanaan dura yeroo heddu baaseen, mootummaa naannoo Amaaraatiif gaaffiilee shan kan dhiheesse tahus hanga ammaatti deebisaa hin arganne. Gaaffilee mana marichaa jidduu, badii raawwatameef mootummaan naannichaa dhiifama akka gaafatu, lammiilee haleellaa kanaan qabeenyi jalaa barbadayeef beenyaan akka kafalamu, Masjiidonni gubaman akka ijaaraman, muslimoota naannichaatiif wabiin nageenyaa akka kennamu qabxiileen jedhan kan keessatti argaman tahuu ibsame.
Haata’u malee mootummaa naannoo Amaaraa irraa deebisaan dhabamus, manni marichaa lammiilee qabeenyi jalaa barbaadaaye gargaaruuf sochii jalqabuus beeksise.
Kana malees manni Marichaa ibsa isaa kanaan, magaalaa Dirree Dhawaa fi Harari dabalatee naannolee biyyattii kanneen biroo keessatti, tuttuqqaan hawaasa muslimaa irratti raawwatamaa jiru hatattamaan dhaabbachuu qaba jechuun akeekkachiise.